Hemisulfate Raw Tianeptine Monohydrate ntụ ntụ (1224690-84-9) - Phcoker
Sulfate Tianeptine, nke a na-akpọ Raw Tianeptine hemisulfate monohydrate ntụ, bụ …… ..
ikike: 1350kg / ọnwa
Ụdị eriri monohydrate nke hemisulfate nke Tianeptine tere (1224690-84-9) video
Ụdị eriri monohydrate nke hemisulfate nke Tianeptine tere (1224690-84-9).
Product Name Ụkwara Tianeptine hemisulfate monohydrate
Chemical Aha Tianeptine hemisulfate monohydrate; 1224690-84-9; Heptanoic acid,
Klaasị ọgwụ ọjọọ Ngalaba & Fine Chemicals
molekụla Fnhazi C42H56Cl2N4O14S3
molekụla Wasatọ 1008.004 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 1006.233 g / mol
Mgbu Point 1800 ℃
Esi Point 269.8 Celsius C na 760 mmHg
Agba anya-White ntụ ntụ
Sume Na mmiri na methanol na dichloromethane
Sịkwa akwa Tigwe Ebe oyi na-ekpo ọkụ
Antinye A na-eji sodium Tianeptine mee ihe na Tricyclic compound na psychostimulant
Ụkpụrụ sodium Tianeptine na-arụ ọrụ site na mgbochi ọnyá na ihe omimi. Mgbochi
Ụdị Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) ntụ ntụ (1224690-84-9)
Ụdị na-emepụta ihe na-eme ka ọ dị ọcha na-egbuke egbuke, nke a na - akpọkwa Tianeptine Sulfate, bụ ụdị nnu dị na tetneptine sodium. Ọ bụghị hygroscopic, dị mfe iji aka, na-ala ala, ọ na-adịgide okpukpu abụọ. O nwere uru niile dị ka Tianeptine Sodium, naanị ụdị sulfate nwere ọkara ndụ nke 5-6 awa, ya mere ọ na-adị okpukpu abụọ dị ka sodium deneptine. N'ihi nke a, ndị na-eme nchọpụta ga-achọ 2-3 ugboro ole sulfate ga-esi nweta nsonaazụ chọrọ ka ha wee hụ sodium n'anya. Sulfate dịkwa obere na-atọ ụtọ na viscosity.
A na-ekewapụta hemisulfate monohydrate nke heteptone dị ka onye na-ahọrọ serotonin reuptake enhancer (SSRE) iji na-emeso ịda mbà n'obi. A zụrụ Tianeptine na France na 1960s ma jiri ya mee ihe n'oge ikpeazụ nke 2000s.
A na-ejikwa ya mgbe ụfọdụ iji na-emeso ọrịa bowel ọrịa ma ọ bụ ụkwara ume ọkụ. A na-akọ na ọ na-emepụta ihe omume ntụrụndụ nke opioid-dika ihe ntụrụndụ dị ka nkwụsị na mkpali, mmelite ume, na euphoria mgbe a na-eme ya.
Hemisulfate hemisulfate monohydrate (THM) ntụ ntụ (1224690-84-9) Ngosipụta nke Action
Otu n'ime usoro ihe omume kachasị maka Tianeptine hemisulfate monohydrate bụ ịbawanye ntinye nke serotonin (5-HT) na ụbụrụ na platelet. N'adịghị ka ọtụtụ ogige tricyclic, Tianeptine apụtaghị na a ga-ejikọta ya na mbelata arụmọrụ arụmọrụ ma ọ bụ ọrụ moto. O yiri ka ọ na-arụ ọrụ na usoro glutamatergic, nke a na-eche na ọ bụ usoro mgbochi antidepressant.
Site na ịbawanye elu serotonin, Tianeptine hemisulfate monohydrate nwere usoro dị iche na SSRIs ọdịnala. Nnyocha ndị a na-adịbeghị anya nyochaa mmetụta nke Tianeptine n'ime usoro nke nkwupụta ụbụrụ na-adịghị ala ala, nke ọ nwere ike inwe ọrụ ụfọdụ. Nnyocha e mere na nso nso a na-egosikwa na Tianeptine nwere ike iso ndị na-anabata adenosine A1 na-emekọrịta ihe.
Ọzọkwa, nchọpụta ndị na-adịbeghị anya a bipụtara na 2014 na-atụ aro na Tianeptine nwere ike ime ihe dịka onye na-akwado ọrịa m -opioid (MOR). Ndị na-eme nchọpụta jiri redligand na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke cell iji mata Tianeptine dị ka onye na-arụ ọrụ MOR dị irè. Ọ bụkwa onye agonist zuru ezu ma na-enwe mmekọrịta dị ala. Tianeptine adịghị arụ ọrụ n'ebe saịtị ntanetị nke k-opioid.
Iji nke Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) ntụ ntụ (1224690-84-9)
Nsogbu ịda mba
Anti-nchegbu na antidepressant na nootropic àgwà
Performance Omumu ihe omuma na ikike imuta ihe
▪ Ahụ mgbu
Akwadoro Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) ntụ ntụ (1224690-84-9) Ụdị
Tianeptine hemisulfate monohydrate onunu ogwu bu ihe dika 25 mg otu ugboro, ma obu ubochi abuo. Ọbụna mgbe ịmalite site na iji usoro onunu ogwu, ọ kachasị mma ịkwụsị ya 2 ma ọ bụ 3 ụbọchị n'izu ọ dịkarịa ala ụbọchị 3 - 4 n'etiti.
Tianeptine hemisulfate monohydrate na-abata na capsule ma ọ bụ ntụ. A na-atụ aro ka ịmalite na obere onunu ogwu ma mụbaa site na obere ruo mgbe emechara usoro onyonyo ziri ezi. Tụkwasị na nke a, obere ọgwụ na-ebelata ikike nke ị addictionụ ọgwụ ọjọọ, nkwụsị siri ike, na ndidi.
Usoro nke 50 - 75 mg nwere ike na-akpali akpali. Ngwurugwu hemisulfate nke Tianeptine monohydrate nke> 100 mg nwere ike ime ka Tianeptine hemisulfate monohydrate dị elu.
Uru nke Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) ntụ ntụ (1224690-84-9)
Ian Tianeptine hemisulfate monohydrate na-eme ka ụbụrụ ghara ịna-arụ ọrụ nke ọma ma na-ebelata ịda mbà n’obi. Neuroplasticity bụ ikike ụbụrụ iji gbanwee ma gbanwee mgbe ọ na-amụ ihe; na-enye aka na mmuta ihe omuma karie na ikike imuta ihe.
♦ Nnyocha nke ndị ọrịa 90 nwere PTSD gosipụtara nsonaazụ dị mma na iji Tianeptine hemisulfate monohydrate. Nnyocha egosila na iji ọgwụgwọ tianeptine sulfate na mbelata dị ukwuu n'ọgba aghara. Tianeptine hemisulfate monohydrate nyere ndị agadi ọrịa egosila iji melite ọrụ neurocognitive ụjọ na mmelite ọnọdụ.
♦ Ọmụmụ anụmanụ na ọmụmụ mmadụ ka e duziri na ọgwụgwọ ọrịa ọrịa Parkinson na Tianeptine hemisulfate monohydrate, na-egosi nrịba ama ọganihu iji melite ogo ọgụgụ isi nke ahụike.
Study Nnyocha nke mbido nke ndị ọrịa 68 na ADHD kwubiri na ọnụ ọgụgụ dị elu dịwanye mma nakwa na Tianeptine hemisulfate monohydrate bara uru iji mee ka ikike nlebara anya dịkwuo mma ma belata omume hyperactive.
Ian Tianeptine hemisulfate monohydrate bụkwa analgesic dị irè (ihe mgbu), ọbụlagodi maka ndị mmadụ na-arịa ọrịa na-adịghị ala ala. Ọ bụ ụzọ dị irè iji belata ihe mgbaàmà metụtara nsogbu ahụike nke eriri afọ.
Institute of Medicine Experimental na Caracas mere izu 52 nke usoro nyocha nke ụmụaka nwere ụkwara ume ọkụ. Ndị ọrịa na-elekọta Tianeptine hemisulfate monohydrate gosipụtara nnukwu mmụba na ọrụ ngụgụ.
♦ Ọ bụ ezie na achọrọ nyocha ọzọ, nchọpụta nke ụmụ mmadụ 237 na ED kpebiri na dianeptine nwere ike ịbụ ọgwụgwọ dị irè.
♦ Ebumnuche nchegbu nke Tianeptine adịghị emetụta acetylcholine ma ọ bụ ịrụ ọrụ n'ime obi, ọ na-eme ka dianeptine bụrụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị agadi na ndị ọzọ
Raw Sunifiram ntụ ntụ (314728-85-3)
Ụdị Hydrobromide Raw Galantamine (69353-21-5)
Ụdị ntụ ntụ sodium Tianeptine tere (30123-17-2)